Iskripthi esilandelayo kuphela esidityaniswe kwicala elingalunganga:
Ukuba ukopa nasiphi na isicatshulwa esikwelo phepha, umtya ongafunekiyo uhlala uphelela kwibhodi eqhotyoshwayo (kolu phumezo ngaphandle kokubhaliweyo). Endaweni "yomyalelo ombi" ngoku unokuza nezinto ezininzi ezimbi. Yonke le nto iyabulala ukuba umgca wophele ekupheleni komgca usetyenziselwa ukwenza ikhowudi kwangoko:
Kulula kwakhona ukuseta kwakhona imveliso yeconsole ukuze umsebenzisi angakuqapheli kwangoko oko akufakileyo. Umzekelo, kunokwenzeka ukuba xa ukopa ikhowudi engenabungozi, umntu angadubula izahlulelo zakhe xa edlula.
Ukuba ukhetha isicatshulwa osifunayo, umzekelo kwiFirefox yangoku (v. 45.0) ayisiyiyo le nto kodwa isicatshulwa esingasemva kwayo esiphelela kwibhodi eqhotyoshwayo.
Zombini ezi ndlela zinokulingwa phila apha. Nantsi umahluko weJS:
Kunye nokwahluka kweCSS: